nnukwu oge Induction Soldering brass Joint Joint
Oke Mgbochị Induction Soldering brass Joint Joint
Ndị na-eme nke ọma rere ọkpụta abụọ a na-ejikọ ọla kọpa 45 °
DW-UHF-10kw ntinye ihe na-ekpo ọkụ
StayBrite # 8 silver solder ọnọ nke ndị ahịa
Bridgit solder na-eweta ndị ahịa
Nkwonkwo akuku brass
Ihe mkpuchi pancake
Ike: 5.5 kW
Okpomoku: Odika 550 ° F (288 Celsius)
Oge: 20 sec
A na-etinye ntụpọ na nkwonkwo niile.
Edoziri ọgbakọ ahụ maka ikpo oku
A na-etinye kpo oku Induction maka 15 sekọnd
A na-etinye mkpanaka bra na nkwonkwo ụkwụ
Ebe ọ bụ na eji aka ya mee ihe nkwado ahụ, a na-etinye eriri mkpuchi n'okpuru nkwonkwo, na-eche akụkụ a na-ahụ anya nke etiti ahụ. Akụkụ a na-ahụ anya nke nkwonkwo a na-atọgbọ n’elu osisi dị larịị, nke a na-anaghị ekwe ka igwe mgbịrịgba ahụ na-agbapụta ma na-agbapụta. Nke a na-eme ka ihe a na-ahụ anya dị mma ma dị ọcha, ebe akwa ahụ na-agbaze ume.
Ọ bụrụ na a na-eji taịlị solder eme ihe, mgbe ahụ a ga-etinye coil ahụ n’elu nkwonkwo. Ọ bụrụ na-eji eriri abụọ pụrụ iche eme ihe, mgbe ahụ, ejikọtara otu nkwonkwo abụọ (elu na ala) site na iji otu.
Enweghị mmepu ọ bụla dị mkpa na nke a. Lee vidiyo ma buo onyonyo enyo maka ihe ndi ozo.
Achọghị nhicha pụrụ iche n'akụkụ abụọ nke nkwonkwo ahụ. Nsona ndị dị na foto a ehichapula akwa nhicha akwụkwọ.
Categories Technologies Tags mgbatị elu ugboro ugboro, solder induction, ntinye ntinye, ogwe mbata akuku, ihe ntanye nke ntanye, igwe ntanye ntinye, nhazi, mgbakwunye ọla, soldering ọla kọpa, castering ọla kọpa, na-etinye ọla kọpa, soldering induction igwe Mail igodo